Rehefa mieritreritra kintana isika, dia afaka mahita ny Masoandro ho ohatra tsara. Gazety iray be mpandany no antsoina hoe plasma, ary toy izany koa no ataon'ny kintana hafa: amin'ny alàlan'ny famokarana angovo nokleary. Ny zavatra tsotra dia hoe karazana kintana samihafa izao tontolo izao . Mety tsy hitovy amin'ny hafa izy ireo rehefa mijery ny lanitra isika ary mahita jiro fotsiny. Na izany aza, ny kintana tsirairay ao amin'ny vahindanitra dia mandalo ny androm-piainany izay mahatonga ny fiainan'ny olombelona ho toy ny tselatra ao anaty haizina amin'ny fampitahana. Ny tsirairay dia manana taonany manokana, lalana iray misy evolisiona izay samy hafa arakaraka ny volany sy ny antony hafa. Ity misy santionany haingana momba ny kintana - ny fomba nahaterahany sy niainany ary ny mitranga rehefa mihantitra izy ireo.
Ny fiainan'ny kintana iray
Alpha Centauri (havia) sy ny kintany manodidina azy. Ity dia kintana goavana lehibe, toy ny Masoandro. Ronald Royer / Getty Images
Rahoviana no teraka ny kintana? Rehefa manomboka mivoaka amin'ny gazy sy vovoka izy? Rehefa manomboka mamiratra izy? Ny valiny dia eo amin'ny faritra misy kintana tsy hitantsika: ny fotony.
Ny astronoma dia mihevitra fa ny kintana dia manomboka ny fiainany ho toy ny kintana rehefa manomboka ny fusionan'ny nokleary. Amin'izao fotoana izao, na aiza na aiza, dia heverina ho kintana goavam-be. Ity dia "làlana ho an'ny fiainana" izay iainan'ny ankamaroan'ny fiainan'ny kintana iray. Ny masoandro dia teo amin'ny fizaran-tany lehibe nandritra ny dimy arivo tapitrisa taona, ary mbola hijanona mandritra ny dimy arivo tapitrisa taona eo ho eo alohan'ny hidirany ho lasa kintana goavam-be. Bebe kokoa "
Ny kintana goavam-be iray dia dingana iray amin'ny fiainan'ny kintana. Günay Mutlu / Getty Images
Ny fizarana voalohany dia tsy mamela ny fiainan'ny kintana manontolo. Iray segondra monja amin'ny fisian'ny tsangambato izy io. Raha vantany vao nampiasa ny solika rehetra tao anaty kodiarana ny kintana iray, dia nivezivezy ny loha-hevitra lehibe ary nanjary loko mena . Miankina amin'ny habeny ny kintana, afaka manalefaka ny fanjakana isan-karazany izy alohan'ny hahatongavan'ny farany ho fotsy fotsy, kintana tsy mitongilana na rava ao anatiny mba ho lasa lavaka mainty. Iray amin'ireo mpifanolo-bodirindrina akaiky indrindra aminay (miteny amin'ny feo miteny), ny Betelgeuse amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny sehatra mena ary dia andrasana ny mandeha supernova amin'ny fotoana rehetra eo anelanelan'ny ankehitriny sy ny taon-jato manaraka. Amin'ny fotoan-tsarobidin'ny fiainana, dia "rahampitso" izany. Bebe kokoa "
Ny kintana sasantsasany dia manjary mavesatra ny namany, tahaka ity iray ity. Mampitombo ny dingan'ny kintana izany. NASA / JPL-Caltech
Rehefa tonga any amin'ny fiafaran'ny fiainan'izy ireo ny kintana ambany ambany tahaka ny Masoandro, dia miditra ao amin'ny dingana mena. Fa ny fanerena avy any ivelany amin'ny fototry ny tsimokaretina avy eo afovoan'ny farany dia manjavona ny tsindry mavesatry ny fitaovana maniry ny hidodododo ao anatiny. Izany dia ahafahan'ilay kintana hanitatra lavitra sy lavidavitra kokoa.
Farany, ny valopy ivelany misy ny kintana dia manomboka miray amin'ny habakin'ny interstellar ary ny ambiny rehetra sisa tavela dia ny sisa amin'ny kintana. Ity ivontoerana ity dia baolina karbona sy karazam-borona hafa izay mamirapiratra rehefa mangatsiaka. Raha matetika antsoina hoe kintana, matetika dia tsy kintana fotsy ny fotsy fotsy satria tsy mahazatra ny fusionan'ny nokleary . Fa ny sisa tavela amin'ny kintana, toy ny kintana mainty na kintana tsy mitongilana . Amin'ny farany dia ity karazana zavatra ity no sisa tavela amin'ny Solobe an'arivony tapitrisa manomboka izao. Bebe kokoa "
Ny kintan'ny tsy mitongilana, toy ny fotsy fotsy na mainty mainty, dia tsy kintana iray fa ny sisa tavela. Rehefa tonga any amin'ny fiafaran'ny androm-piainany ny kintana goavambe , dia miteraka fipoahana ambonimbony izy io, ka mamela ny fon-afera mamirapiratra. Ny lasopy iray dia mety ho feno ny kintan'ny kintana tsy mitongilana dia mitovy amin'ny Volana mitovy amin'ny Moon. Tsy misy afa-tsy ireo zavatra fantatra fa misy ao amin'ny Universe izay manana dity lehibe kokoa ny lavaka mainty. Bebe kokoa "
Io lavaka mainty io, eo afovoan'ny vahindanitra M87, dia manaparitaka rongony ara-nofo avy amin'ny tenany. Ireo lavaka maintimainty toy izany dia matetika no betsaka ny Masoandro. Ny lanjam-peo mainty iray dia kely lavitra noho io, ary tsy dia lehibe loatra, satria vita tamin'ny kintana iray monja. NASA
Ny lavaka mainty dia vokatry ny kintana maro manjavona mamely ny tenany noho ny herimpo goavan'izy ireo. Rehefa tonga any amin'ny fiafaran'ny andavanandron'ny fiainany ny kintana, dia manandratra ny ampahany ivelany amin'ny kintana ivelany ny supernova manaraka, ka ny sisiny sisa no tavela. Ny pensilihazo dia ho lasa be dia be ka tsy afaka ny handositra ny fahazavany. Ireo zavatra ireo dia tena manintona tokoa fa ny lalàna mifehy ny physique dia mamotika. Bebe kokoa "
Ireo hazandrano mavokely dia tsy kintana tsy mitongilana, izany hoe - zavatra izay tsy ampy ho an'ny kintana tanteraka. NASA / JPL-Caltech / Fandaminana Gemini / AURA / NSF
Tsy tian'ny kintana i Brown, fa ny kintana "tsy nahomby". Mitovy amin'ny karazana kintana ara-dalàna izy ireo, na dia tsy manangona betsaka loatra aza izy ireo mba handotoana ny fusionan'ny nokleary ao amin'ny vatana. Noho izany izy ireo dia tsy dia lehibe loatra raha oharina amin'ny kintana fizarana lehibe. Raha ny marina dia hita fa mitovitovy amin'ny planeta Jupiter ny habaka, na dia betsaka kokoa aza (ary noho izany).
Ny kintana variana dia misy amin'ny vahindanitra, ary na dia amin'ny cloblers globular toy ity aza. Miantehitra amin'ny famirapiratana izy ireo mandritra ny fotoana voafetra. NASA / Goddard Space Flight Center
Ny ankamaroan'ny kintana izay hitantsika amin'ny lanitra amin'ny alina dia mitazona fahazavana tsy tapaka (ny fikotrokotroky ny fijerintsika indraindray dia noforonina avy amin'ny fihetsiky ny rivotra iainantsika manokana), fa ny kintana sasantsasany dia miovaova amin'ny fahazavany. Kintana maro no manova ny fiovaovan'ny toetrany (toy ny kintana tsy mitongilana rotaka, antsoina hoe pulsars) ny kintana miovaova indrindra manova ny famirapiratana noho ny firoboroboana sy ny fifandirana tsy tapaka. Ny vanim-potoan'ny be sy ny be marenina dia mifanohitra mivantana amin'ny famirapiratana anatiny. Noho izany antony izany, ny kintana varimasina dia ampiasaina handrefesana ny halaviran-tany satria ny vanim-potoana sy ny famirapiratana hita (mazava ny endriny maneho antsika eto an-tany) dia mety ho voavaha amin'ny famaritana ny halaviran-dry zareo avy amintsika.
Matetika ny maizina: inona no anjara asan'ny galaxy?
Ny Black Holes dia miteraka fananganana kintana
Ireo rambony: Inona no azon'izy ireo ary azontsika ampiasaina?
Mandefa hafatra avy amin'ny Galaxy's Core
Fantaro ireo fotokevitra momba ny Mars: Ny Next Home Home!
Inona avy ireo kintana Hypergiant?
Ejipta fahiny: Battle of Kadesy
Ny tsara indrindra 'Karazan'I South Park' sy ny Episodes
Cent, Famaizana ary Voasoratra
'Écouter la Radio' amin'ny teny Frantsay 'Mihaino ny Radio' amin'ny teny Frantsay
Cassava - Ny Tantaram-pianakaviana Manioc
Ahoana ny fomba hanovana ny tahirin-tsambo toy ny pro
All about the US Postal Service Islamic Stamp Stamp
Ahoana ny fomba hanadiovana ny Slate Dive sy ny laptop
'Ny volom-borona volavolan'ny minisitra' - tantara fohy
Miondrika ao anaty ala: Ny fifaninanana Black Power Boxing Match of Century
10 Facts About Dimetrodon, "Dinosaur" Non-Dinosaur
Ireo Top 10 Pitbull Songs
Avy aiza ny mozika?
Fandripahana ala any Azia
Ny takelaka roa alemana roa sy ny fomba fampiasana azy ireo
Ornithopods - The Small, Dinosaurs Crusades
Hatch Act: Famaritana sy ohatra amin'ny fandikana
Ny mpamono amin'ny varavarankely
Tetik'ady mahasoa ho an'ny famolavolana fahazavana
Fomba ahoana no hanalavirana ny fandoroana sy ny hatezerana vokatry ny fialana amin'ny bisikiletanao
Viking Invasions: Ny ady tao Maldon
Ny tanjona sy ny fananganana ny tavy mipetaka
Manambady amin'ny Travel Visa